कम्प्युटरबाटै सगरमाथाको यात्रा
Aakar May 31, 2014
म जहिले सोच्थेँ, सगरमाथा बेसक्याम्प कस्तो छ, खुम्बु आइसफल कहाँ छ, हिलारी स्टेप कस्तो देखिन्छ आदि इत्यादि । फोटो र चलचित्रमा धेरै पटक सगरमाथा हेरियो तर सगरमाथाको खासै भेउ पाउन सकिएको थिएन । अप्रिल तेस्रो साता खुम्बुमा हिमपहिरो गएसँगै 'डिस्कभरी'ले केही हप्ता पहिले 'एभरेष्ट अभलान्चे ट्याजिडी' साइट सार्वजनिक गरेकोछ , जसबाट घरै बसेर सगरमाथा चढेको अनुभव (थ्रिडी अनुभव) गर्न सकिन्छ। सगरमाथा बेसक्याम्पबाट सुरु हुने ट्रेक, खुम्बु आइसफल, हिलारी स्टेप हुँदै सगरमाथाको टुप्पामा पुगेर टुंगिन्छ । सगरमाथाको टुप्पाबाट हिमालहरुको दृश्यावलोकन पनि मज्जाले गर्न सकिन्छ, सायद यसै कारण पनि होला, सबैजना सगरमाथा चढ्न मरिहत्ते गरेका । साइटमा, खुम्बुमा गएको हिमपहिरोको पनि वर्णन गरिएकोछ, ब्याकग्राउन्डमा मान्छेहरु बोलेको, अनि हिमालको चिसो स्याँठको आवाजको अनुभव गर्नसकिन्छ, ट्रेकभरि नै । साइटको वाँया भागमा उचाइको जानकारी देखिन्छ, बाटोलाई रातो धर्सोले देखाइएको छ । बेसक्याम्प देखि टुप्पासम्मको यात्रा कठिन रहेछ भन्नेकुरा डिस्कभरीको थ्रिडी ट्रेक गरेपछि अनुभव भयो । खुम्बुमा गएको हिमपहिरो
अघिल्लो महिना ट्विटरले प्रोफाइलको नयाँ डिजाइन सार्वजनिक गर्यो । नयाँ प्रयोगकर्ताहरु भित्र्याउन अनि टिकाउन नसकेको आरोप खेपिरहेको ट्विटरले, नयाँ प्रयोगकर्ताहरुलाई ध्यानमा राखेर नयाँ डिजाइन सार्वजनिक गरेको हो। ट्विटरमा धेरै सुनिने गुनासो भनेको, कसैले फलो गर्दैनन्, फलोब्याक पनि दिँदैनन्, फलानोले फलोब्याक गरेन अनफलो गर्छु, फलानाले भाउ खोज्यो त्यसलाई ब्लक हान्छु ! गुनासो सबैको आ-आफ्नै ठाउँमा छ, तर पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, ट्विटर चलाउनु भनेको फलो गर्नेलाई फलोब्याक गर्नैपर्छ भन्ने होइन । ट्विटर चलाउनेहरु आ-आफ्नै रुची अनुसार ट्विटर चलाउने हुँदा, रुचीका विषयमा ट्विट गर्नेहरुलाई प्राय: ले फलो गर्छन् । खासगरी नयाँ प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरुमा ट्विटरमा टिक्नको लागि आफ्नो साथी वा सर्कल बनाउनुपर्ने/खोज्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ प्रयोगकर्ताहरुले सुरुमा आफ्नो रुचीको विषय ट्विट गर्ने, आफूलाई मन परेका थोरै व्यक्तिहरुलाई फलो गर्नुपर्छ र उनीहरुसँग कुराकानी थाल्नुपर्छ । कुराकानी गर्दैगएपछि, तपाईले पच्छ्याएकाले तपाईलाई फलोब्याक दिन्छन् (कुराकानी भन्नको मतलब प्रसंगमा रहेर गरिएका कुराकानी)। ट्विटर कसरी
अप्रिलको पहिलो हप्ता सिमित प्रयोगकर्ताहरुको समूहलाई उपलब्ध गराएको नयाँ 'वेव प्रोफाइल' आजबाट ट्विटरले सबैका लागि खुल्ला गरेकोछ । फेसबुक र अन्य सोसल नेटवर्किङ साइटको दाँजोमा ट्विटरमा थोरै प्रयोगकर्ताहरु भएका कारण ट्विटरले नयाँ प्रयोगकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न केही समय अघि देखि विभिन्न तरिकाहरु परिक्षण गरिरहेको छ । अहिलेको नयाँ प्रोफाइललाई पनि त्यसैको निरन्तरताको रुपमा लिनसकिन्छ । ट्विटरमा भर्खरै भित्रिएको 'नोटिफिकेसन', चारवटा सम्म 'अपलोड' गर्न र ट्याग गर्न मिल्ने फोटो, अनि आज सबैका लागि सार्वजनिक गरिएको वेव प्रोफाइल आदिका कारण, ट्विटर अहिले फेसबुक झैँ देखिएकोछ । अझ केही प्रयोगकर्ताहरुको लागि त 'रिट्विट' को सट्टा 'सेयर', अनि युजरनेम विना 'रिप्लाइ' गर्ने फिचरहरु पनि ट्विटरले परिक्षण गरिरहेकोछ । यसका साथै ट्विटरले मोवाइल एप्सको पनि नयाँ अपडेटहरु छिटोछिटो दिइरहेकोछ तर नयाँ प्रोफाइल भने अहिलेसम्म 'वेव'को लागि मात्रै उपलब्ध छ । साँच्चै भन्ने हो भने, ट्विटर नयाँ प्रयोगकर्ताहरुको संङ्ख्या बढाउन लागिपरेकोछ । Old Twitter Layout ट्विट
Aakar April 01, 2014
अघिल्लो वर्षको जनवरीमा लेखिएको " एउटा फेक ट्विटर एकाउन्टको नाममा " ब्लग वर्षैभरि अन्यन्तै चर्चित रह्यो । सायद यसैको प्रभाव हुनुपर्छ, अघिल्लो हप्ता ईमेलमा अमेरिकी बसाइ अनुभव संगालिएको बाबुरामजीको एउटा प्राइभेट 'अनलाइन जर्नल' (डायरी) आइपुग्यो। नियमित त हैन, तर कहिलेकाँही भने तिम्रो ब्लग हेर्छु भनेर लेखिएको थियो । त्यसै 'जर्नल'मा रहेको 'अमेरिकी छलाङ्ग'का केही सम्पादित अंशहरु तल प्रस्तुत गरेकोछु । १. म यसै बसिरहेको हुन्छु, फोनमा खेलिरहेको हुन्छु, घरी ट्विटर घरी फेसबुक घरी के चलाई रहेकोहुन्छु। यसैमा भान्सामा काम गरिरहेकी मेरी प्राण प्यारीको नजर म माथि पर्छ। अनी उनी भन्छिन, "यसै फोन चलाएर बस्नु भन्दा त बरु ईन्टरनेट खोलेर मेरो फोन र ईन्सुरेन्सको अटो पे'मा राखिदिनु नि, महिनै पिच्छे सम्झिदाँको टेन्सन त हुन्न मलाई" ! म एकदम ज्ञानी पति बनेर ल्यापटप खोल्छु। पासवर्ड हालेर विण्डोज खोलि सकेको हुदैन, मेरी प्राण प्यारी भान्साबाट मर्जी हुन्छिन । "कहिले काँहि त बुढिलाई भान्सामा सहयोग गरे नि हुने नि, कहिले फोन त कहिले ल्यापटप"। २. एक जन
फेसबुकमा पाँच हजार साथी पुगे अब आफ्नो "पेज" बनाउँछु भनेर हिजोआज धेरै साथीहरु तम्सिएको देखेकोछु । तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, तर हिजोआज प्रायजसो व्यक्तिगत 'पेज'को जरुरतलाई 'प्रोफाइल'ले नै पुरा गरिदिन्छ । तपाईको प्रोफाइल तपाई आफैँले मात्र चलाउनुहुन्छ भने, तपाईको लागि 'फेसबुक पेज' खर्चिलो र झन्झटिलो मात्र हुनजान्छ । तर तपाईको 'सोसल मिडिया' उपस्थिति म्यानेज गर्ने टिम नै छ भने, पेज सही विकल्प हुनसक्छ । जस्तो एउटा उदाहरण हेरौँ: यदि तपाईंले पेज पनि बनाउनु भयो र उक्त पेज आफैँले म्यानेज गर्नुपर्छ भने सोच्नुस्, तपाईका फलोअरहरु दुई तिर बाँडिनेछन् पेज र प्रोफाइलमा । दुबैमा अपडेट दिनुपर्यो, कतिपय प्रसंगमा त एउटै कुरा दुई तिर पोष्ट गर्नुपर्छ। फेरि दुईटैमा नियमित हुनुपर्यो। दुबैमा आएका, कमेन्ट र म्यासेज पनि हेर्नुपर्यो । यस हिसाबले मात्रै पनि एउटा कामको लागि समय दोब्बर लाग्छ । अर्को कुरा, तपाईको आफ्नै प्रोफाइललाई पेजमा परिवर्तन गर्नुभयो भने पनि, तपाईका सबै डाटाहरु मेटिन्छन् । आफ्ना चिनेका साथीहरुको सर्कल दुई तिन सयको हाराहारीमा छ र अरु धेरै साथीहरु नबनाइ
फेक 'लाइक'ले, फेसबुक मालामाल, ब्रान्डहरु कंगाल
Aakar February 23, 2014
फेसबुकको लोकप्रियता सँगै "सोसल मिडिया मार्केटिङ"को ट्रेन्ड देखापर्यो । अझ फेसबुकले 'बिजनेस पेज'को अवधारणा ल्याएपछि र इन्टरनेट जनसङ्ख्या फेसबुकमा तानिएपछि, अधिकांश कम्पनी/ब्रान्डहरुले 'फेसबुक'मा आफ्नो उपस्थिति जनाउन थाले । कोकाकोला र रिहानालाई मात्र होइन, नेपाली अनलाइन टिसर्ट स्टोर 'थ्रेडपेन्ट्स' लाई पनि फेसबुक बरदान सावित हुँदैआएकोछ । फेसबुकका अनेकौँ फाइदाहरु हुँदाहुँदै पनि यतिबेला फेसबुक 'लाइक'का बारेमा विभिन्न टिका-टिप्पणीहरु आउने गरेकाछन्, विशेषत 'फेसबुक विज्ञापन'का कारण । सोसल मिडिया मार्केटिङ अहिलेको समयमा ब्रान्ड तथा कम्पनीहरुको लागि अत्यावश्यक कुरा हो । फेसबुक लगायतका केही मार्केटिङ एजेन्सीहरुले सोसल मिडिया मार्केटिङलाई 'फेसबुक विज्ञापन' र 'फेसबुक लाइक' हो भनेर बुझाउने गरेका कारण हिजोआज ब्रान्डहरु कंगाल भइरहेकाछन् । धेरै लाइक/फ्यान ल्याउन कम्पनीहरु फेसबुक विज्ञापनमा लाखौँ खर्च गरिरहेकाछन् तर वास्तविकतामा उनीहरु 'फेक' लाइक किनिरहेकाछन् जसको हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन । ब्रान्ड तथा कम्पनीहरुले जा